Iliso likaRa Tattoo - Inkcubeko Tattoos
Iliso likaRa Tattoo
Iliso likaRo tattoo, ngamanye amaxesha elibizwa ngokuba yiTo tattoo kaHorus, luphawu lwase-Egypt olusabonakala nanamhlanje.
Malunga neliso likaRa Tattoo
Iliso likaRa lifanekisela uthixo wasezulwini wase-Egypt (ngamanye amaxesha abhekiswa njengothixo welanga nje) kunye nokukwazi kwakhe ukubukela nokujonga izinto ozenzayo. Kukwatsho ukuba kufanekisela ukukhanya kunye nazo zonke izinto ezilungileyo kunye nokukhusela imimoya emdaka. Amanye amagama anikezelwe kulo mqondiso afaka i-Wedjat kunye ne-Oudjat.
Iifoto ze-Unisex ezisezantsi eziseTatoo
Ifoto yegalari yeAngel Tattoos
Iliso likaRo tattoo lisebenza njengophawu lokhuselo kunye nokuphilisa. Imelwe njengeliso elihlangeneyo elinomgca ngaphezulu kwayo ukubonisa isiciko esingaphezulu kunye neminye imigca emibini okanye emithathu emasebeni ezantsi kweliso elivela kwikona engaphandle kwaye inike imbonakalo yamehlo okhetshe. Ihlala ibonwa ngombala (ngakumbi eluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka) kunye nesitayile sobuzwe bomnyama nomhlophe. Ewe, kukho umahluko okwahlukeneyo kuyilo olusekwe kubuchule begcisa lomvambo kunye nomamkeli wethambo.
Iliso limela iliso lasekunene likaHorus, iliso elahluthwa kuHorus njengoko wayelwa nomntakwabo uSete esihlalweni sobukhosi emva kokuba uSete ebulele utata wabo, uOsiris. UHorus, uthixo odla ngokuboniswa njengekhozi okanye indoda enentloko ye-falcon, wayengunyana ka-Isis, kwaye iliso lasekunene, iliso lelanga, khange lenzakaliswe ngexesha ledabi. Omnye uthixo walungisa iliso emva kwemfazwe kwaye uHorus walinikela kuyise. Yambuyisela ebomini kwaye ke yaziwa ngokuba luphawu lokuphilisa, kwaye uHorus waziwa njengomkhuseli wabantu base-Egypt. Ukusuka apho, iliso likaRa lesimboli labekwa kunye nezidumbu kwaye zinxitywe njengezacholo.
Nangona ingezizo ii-tatoo, isikhokelo sokuqonda esongezelelweyo sinemifanekiso embalwa entle yeLiso likaHorus elinokusetyenziselwa ukuyila.
Kukho iintlobo ezimbini zeLiso likaRo tattoo Tribal-Celtic-Tattoo.com . Enye ye tattoo elula emnyama yonke, kwaye enye iluhlobo olubomvu noluhlaza kunye nentsimbi ephefumlelweyo yesizwe ejikeleze yona.
Umvambo uneLiso elintsonkothileyo loyilo lukaRa. Iliso liyamangalisa kwaye yindawo ekugxilwe kuyo ye tattoo enkulu ene-ankh kunye namaphiko.
Iitattoos ngoyilo ineendlela ezininzi zoyilo, kubandakanya iliso likaRa ngamaphiko kunye nomvambo kaHorus njengendoda enentloko kakhetshe. Nceda uqaphele ukuba ukujonga imifanekiso yesayizi epheleleyo, kuya kufuneka uhlawule umrhumo.
Ukubekwa ngokuqhelekileyo kweliso likaTatus tattoo ligxalaba okanye isifuba. Nangona kunjalo, inokulingana kakuhle naphina emzimbeni njengoko ubungakanani kunye nobunkunkqele kuyilo kulula ukuluqhuba. Awudingi Iliso elineenkcukacha kakhulu zikaRa ukuze ufumane uphawu oluza nayo, kodwa ukuba ufuna itattoo enkulu kakhulu, inokuba yinxalenye yokuhambelana okanye indawo ekugxilwe kuyo ye tattoo enkulu. Imvumi uRobbie Williams uneLiso likaRa ngasemva kwentamo yakhe.
Ukuba uyazithanda iisimboli zaseYiputa kunye neentsomi okanye ufuna umvambo ophawula ukhuseleko kunye nazo zonke izinto ezilungileyo ebomini, kutheni ungaqwalaseli uyilo lweLiso likaRa? Unokukhetha enye emnyama nomhlophe okanye enye ngombala (umbala opheleleyo okanye amanqaku aphezulu ombala). Okanye, khetha nje uyilo lwesiko okanye ulungelelanise ngokwakho okanye ngoncedo lomculi we tattoo. Ukubonisa ngcono ubuntu bakho, jonga ezinye izinto ongathanda ukuzibandakanya kuyilo okanye ulunge kwindawo echongiweyo.
Ezamahala Medical And Liability Rasease Forms Enye Indlela Izinwele Umsebenzi Udliwanondlebe Tips Iindidi E Zomzimba Ubugcisa Malunga Ukudibanisa
Iikati zasekhaya ezibonakala ngathi ziingwenkala
yintoni ehamba kakuhle nejack daniels
yeyiphi i-geritol yokuthatha ukuze ukhulelwe